ပြည်ဝင်ခွင့်ကန့်သတ်ချက်များအား ဇူလိုင်လ(၃၁)ရက်အထိ ထပ်တိုး………. | YTV
ပြည်ဝင်ခွင့်ကန့်သတ်ချက်များအား ဇူလိုင်လ(၃၁)ရက်အထိ ထပ်တိုး……….
June 30, 2020 36 Viewers
ကမ္ဘာ့နိုင်ငံအသီးသီးကနေ မြန်မာနိုင်ငံကိုလာရောက်မယ့် ခရီးသွားတွေအပေါ် ပြည်ဝင်ခွင့် ကန့်သတ်ချက်တွေကို ဇူလိုင်လ(၃၁)ရက်နေ့အထိထပ်တိုးမြှင့်လိုက်တယ်လို့ နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဌာနက ထုတ်ပြန်ပါတယ်။ နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဌာနအနေနဲ့ ပြည်ပခရီးသွားတွေနဲ့ ပတ်သက်ပြီး ကိုဗစ်ကာလအတွင်းမှာ ပြည်ဝင်ခွင့် ယာယီကန့်သတ်ချက်တွေကို ထုတ်ပြန်ခဲ့ပြီးဖြစ်ပါတယ်….............
မြန်မာနိုင်ငံကို လာရောက်ကြတဲ့ ခရီးသွားတွေအပေါ် ကြိုတင်ကာကွယ်ရေးကန့်သတ်ချက်တွေနဲ့ စပ်လျဉ်းပြီး မတ်လ(၁၅)ရက်နေ့က ကြေညာချက်ထုတ်ပြန်ခဲ့သလို ကြိုတင်ကာကွယ်ရေးကန့်သတ်ချက်တွေအပြင် ဆိုက်ရောက်ဗီဇာနဲ့ အီလက်ထရောနစ်ဗီဇာထုတ်ပေးခြင်းတွေကို ယာယီရပ်ဆိုင်းမှုတွေနဲ့ စပ်လျဉ်းကာ မတ်လ(၂၀)ရက်နေ့ထုတ်ပြန်ခဲ့ပြီးလည်းဖြစ်ပါတယ်…......
ဒါ့အပြင် မြန်မာနိုင်ငံကို လာရောက်ကြတဲ့ ခရီးသွားတွေအပေါ် ကြိုတင်ကာကွယ်ရေးကန့်သတ်ချက်တွေကိုတွေကို ထပ်တိုးကြောင်းလည်း မတ်လ(၂၄)ရက်က ထပ်ကြေညာခဲ့ပြီး နိုင်ငံခြားသားတွေကို ဗီဇာကင်းလွတ်ခွင့်နဲ့ လူမှုရေးဗီဇာအပါအဝင် ဘယ်ဗီဇာအမျိုးအစားကိုမဆို ယာယီရပ်ဆိုင်ကြောင်း မတ်လ(၂၈)ရက်က ထုတ်ပြန်ခဲ့ပြီးဖြစ်ပါတယ်။ ကိုဗစ်ရောဂါကူးစက်ပျံ့ပွားမှုကို ထိန်းချုပ်နိုင်ဖို့အတွက် ပြည်ဝင်ခွင့် ယာယီကန့်သတ်ချက်တွေကို ဇူလိုင်(၃၁)ရက်နေ့အထိ ထပ်တိုးလိုက်တာဖြစ်တယ်လို့ ဆိုပါတယ်….........
မြန်မာ့တပ်မတော်ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ် ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီးမင်းအောင်လှိုင် အိန္ဒိယကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးနဲ့ ရုရှားမှာတွေ့ဆုံ…………. ကျန်းမာရေးနှင့် အားကစားဝန်ကြီးဌာနမှချထားပေးသော Outdoor Fitness Equipment အားကစားပစ္စည်းများအား လွှဲပြောင်းပေးအပ်ပွဲကျင်းပ…………